Fikambanan-jiolahy :: Sarona ireo enina mianadahy mpanamboatra basy sy vola sandoka • AoRaha
Fikambanan-jiolahy Sarona ireo enina mianadahy mpanamboatra basy sy vola sandoka
Ataon’ity fikambanan-jiolahy iray ravan’ny zandary, tany Sambava, ity avokoa na vola sandoka na fitaovam-piadiana, toy ny basy sy bala. Olona enina no voasambotra tamin’ izany, afak’omaly antoandro. Sarona ny vola sandoka efatra alina sy iray hetsy sy telo tapitrisa ariary, niaraka tamin’ny basy am-polony vita tanana. Ahitana vehivavy roa amin’ireo tratra ireo.
Efa ela no nahenoana sy nikarohan’ny zandary momba an’ity andian-jiolahy mpanao vola sandoka sady mpanefy basy poleta vita tanana entina manao asan-jiolahy any amin’ ny faritra Sava ity. Nidinan’ny mpitandro filaminana tany Ambatofitaratra sy Besopaka Ambany ary Analapenja, samy any amin’ny kaominina Sambava, afak’omaly. Nosavaina ireo trano tany amin’ireo toerana telo ireo.
Lelavola sandoka amin’ny roa alina ariary miisa fito amby dimampolo amby zato, mitentina 3.140.000 ariary, avy eo basy poleta sivy efa vita tefy niaraka tamin’ny lasitra roa fanamboarana basy ary bala roa no hitan’ny zandary. Karazana akora sy fitaovana maro fanamboarana fitaovam-piadiana ary taratasy hosoka no tratra ihany koa.
Nentina, avy eo notazonin’ ny zandary ary miatrika famotorana ireo olona enina ireo, eo am-pikarohana ny namany hafa sy ireo fitaovam-piadiana mety ho efa naparitak’izy ireo.
Fanenjehana dahalo :: Mpanao ody bala maty voatifitra
Fisafoana :: Mpandroaka omby halatra nifanehitra tamin’ny zandary